PPC akpaaka: Keywords Gara Ọhịa | Martech Zone
PPC akpaaka: Keywords Gara ọhịa
Tuzdee, Machị 15, 2011 Monday, October 12, 2015 Chris Bross
Ọnwa abụọ gara aga, anyị nụrụ banyere otu ụlọ ọrụ dị ikele ihe karịrị otu nde Keywords. Ndị ahịa ụlọ ọrụ ahụ chere na nke a dị mma. N'ezie?
Ọ bụrụ na mmadụ nwere nnukwu PPC Budget, olee ihe nwere ike ịbụ ihe na-ezighi ezi na ọnụ na ọnụọgụ ọtụtụ Keywords? Ihe e mesiri ike na egwuregwu Broad, "Fat Fat", enweghị ntinye okwu adịghị mma, yana ojiji nke akpaaka / Dynamic Keyword Insertion na-eduga na ngosipụta nke mgbasa ozi na-adịghị arụ ọrụ / enweghị isi.
Otu afọ gara aga, mgbe anyị na-achọ nyocha nwa-nnụnụ, otu n'ime ndị ndụmọdụ anyị PPC hụrụ mgbasa ozi na-akpọ "yslọ ụmụaka maka ọrịre ma ọ bụ mgbazinye!"
Na ahụmịhe anyị, a na-emepụta mgbasa ozi ndị dị otú ahụ na-akpaghị aka site na ngwaọrụ ndị na-emepụta Keywords dabere na ọchụchọ n'ezie na ederede Mgbasa ozi izugbe. Ya mere, ị ga - ejedebe na Otu Mgbasa Ozi nwere ọnụọgụ nke Keywords (puku kwuru puku, nke na - enweghị njikọta na ibe ya) na Mgbasa Ozi PPC nke na - esote enweghị ike iji jikwaa ma ọ bụ ijikwaa.
Lee ụfọdụ ihe atụ ndị na - adịbeghị anya:
Achọ nwa na-enweghị triggered na-enye "Ego nwa na-ere!" mgbe ụlọ ọrụ na-ere ụmụ nwoke uwe.
Otu ụlọ ọrụ na-ere Plumbing onunu gosipụtara maka ihe ịzụta ịzụta.
Otu n'ime ụlọ ahịa na-ere akwụkwọ n'ịntanetị kachasị ukwuu gosipụtara PITA. Kasị njọ, lee URL ngosi. Gini ka patio nwere na ulo, ma obu akwukwo?
Dị ihe atụ ndị a ga-adị mfe ịchọta ma ọ bụrụ na ịme ọchụchọ ole na ole na Keywords ndị ọzọ. Ọzọkwa, n'otu oge, ị ga-enweta mkpuru na ọchụchọ a kapịrị ọnụ mgbe ị na-atụghị anya ya.
N'ezie, leverage PPC akpaaka mgbe ikwesiri ịchekwa na ọrụ aka mmadụ, mana emela nke a iji rụkwaa ọrụ gị nke ọma. Mgbe mkpọsa PPC gị anaghị edozi nke ọma, ị ga - eche ya PPC Keywords Gara Ọhịa.
Akụkọ ndị a ị hụrụ bụ eziokwu; naanị aha ụlọ ọrụ ka ehichapụla iji chebe ndị na-amaghị ihe.
Tags: akpaakaakpaakaKeywordsakwụ ụgwọ akpaaka adakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ ọrụ akpaakappcakpaaka ppc
Iweghachi obi WordPress saịtị